कोरोना असरलाई टार्न व्यवसाय बढाउन गरेको हर्कतले दुनियाँ हैरान ! – Khabaarpati
December 21, 2020 December 21, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on कोरोना असरलाई टार्न व्यवसाय बढाउन गरेको हर्कतले दुनियाँ हैरान !
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अर्थतन्त्र धराशयी बनेको छ । यो बीचमा व्यापार व्यवसायलाई बढाउनका लागि नयाँ–नयाँ तरिकाहरु खोज्न सुरु गरिएको छ । अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा एक रेस्टुरेन्टमा भएको घटनाले सबैलाई हैरान बनाएको छ ।
त्यहाँ दुई जनाको एक समूहले २४ हजार भन्दा धेरैको बिलमा टिप्सको रूपमा झण्डै ६ लाख दिएका हुन् । सीबीएस फिल्मका अनुसार ग्राहकको नाम खुलाइएको छैन । उनी रेस्टुरेन्टको नियमित ग्राहक भएको बताइएको छ । कन्ट्री क्लब रेस्टुरेन्टको नाम एन्थोनी पक्ससन होलो हो । राज्य सरकारले कोरोनाभाइरस महामारीको कारण भित्री भोजन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।गोल्फहरूको समूह प्रतिबन्धको पहिले दिन आएको थियो । उनीहरुले वेटरस जियाना डान्जेल्लोको लागि टिप छोडिदिएका हुन् । रेस्टुरेन्ट ग्राहकहरुलाई धन्यवाद दिनका लागि फेसबुकमा एक पोस्ट गरेको छ । एउटा पोष्टमा लेखेको छ, ‘हामीसँग धन्यवाद बोल्नु बाहेक अर्को शब्द छैन ।’ यो पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर भइरहेको छ ।
उनले लेखे, ‘यहाँ हाम्रो स्टाफका लागि अविश्वसनीय समर्थन प्राप्त भयो । हाम्रा कर्मचारीहरुलाई बिदा मनाउन मद्दत गर्नु भएकोमा धन्यवाद ।’ एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘तपाईले ठूलो काम गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यबाद । यो कठिन समयमा, उद्योग धेरै नोक्सानमा छन् ।’टिपको बारेमा, जियाना डान्जेलो भन्छन् कि उनी अचम्मित छन् । जियानाले एबीसी न्यूजलाई भनिन्, ‘म सबै कुरामा खुशी छु । जब मलाई ५ हजार डलरको टिप दिइयो, म स्तब्ध भए । म त्यो पैसा कलेजको लागि राख्दै छु र यसलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न प्रयोग गर्ने छु । डान्जेलो एक नर्स बन्न अध्ययन गर्दैछन् ।’